FIIRSO:-Nuxurka hadalladii xasaasiga ahaa ee Xildhibaanada Golaha Shacabka – War La Helaa Talo La Helaa
FIIRSO:-Nuxurka hadalladii xasaasiga ahaa ee Xildhibaanada Golaha Shacabka
By madoobe	 On Sep 17, 2018
Kulankii Baarlamaanka federalka Soomaaliya ee maanta oo looga hadlay dhinaca Amniga ayaa Xildhibaanadii hadalada ka jeediyey waxa ay dhammaan walaac ka muujiyeen xaalada Amni ee dalka.
Xildhibaan Caasho Koos: Wadooyinka Ciidamadu joogaan qaar kood kuma kalsooni qabno waxaana ku marnaa hooyooyin soomaaliyeed ayaa nahay taasina waa cabsi jirta.
Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi: Amnigu faraha ayuu ka baxay waxa uu marayaa heer shabaabku dadka baadaan, Ra’isul wasaaraha amnigu uu sheegayo ma ahan amnigii saxda ahaa ee dalku u baahnaa, isagu geesaha ayuu iska marinayaa wiilal looo geliyay dhar isu eg. Madaxweynuhu wuxuu noo sheegay in laba sano gudohood uu ku soo afjari doono shabaab hadana waxaa ka dhiman 4 bilood ama wax ku dhow hadana halkaas ayaan maraynaaa.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale: Dowladu halkii ay weerar ku ahaan lahayd Al-shabaab iyagaa weerar nagu ah, saxna ma ahan!
Sido kale Xildhibaanku wuxuu sheegay in dadkii ku noolaa magaalooyinka ay dowladda xukunto ay cadaald iyo garsoor ba u aadayaan Maxkamadaha Al shabaab
Xuseen Carab Ciise: Dalkaan waxaa ka jira cadaalad darro wayn iyo musuqmaasuq ballaaran, anigan oo xildhibaanka ah ayaa dhulkaygii la iigu haystaa oo sharciyo been la iisoo samaystay, Dadkuna iney shabaab u garsoor tagaan waa cadaalad darrada jirta iyo musuqa.
Masuul ka tirsan shirkadda Amal oo lagu dhaawacay Muqdisho